အမျိုးသားအဆင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒ၊ မဟာဗျူဟာနှင့် ပင်မလုပ်ငန်းစဉ်ကို အတည်ပြု? - Yangon Media Group
အမျိုးသားအဆင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒ၊ မဟာဗျူဟာနှင့် ပင်မလုပ်ငန်းစဉ်ကို အတည်ပြု?
အမျိုးသားအဆင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာမူဝါဒ၊ မဟာဗျူဟာနှင့် ပင်မလုပ်ငန်းစဉ်ကို အတည်ပြုထုတ်ပြန်နိုင်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းကပြောသည်။ ယနေ့နံနက်ပိုင်းက နေပြည် တော် သင်္ဂဟဟိုတယ်တွင်ကျင်းပသည့် မြန်မာ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲ မှုဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ်စီမံကိန်းအပြီးသတ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန် ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းမှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦး အုန်းဝင်းက ”ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိရေးနှင့်ကြံ့ကြံ့ခံတုန့်ပြန်နိုင်ရေးဟာ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းဖြစ်သလို တစ်ဖက်မှာလည်းရေရှည်တွင် ကာဗွန်ထုတ်လွတ်မှုနည်းသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုအလေးထားပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း သိမ်းရေးကို ဟန်ချက်ညီညီပေါင်း စပ်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုအပ်ပါ ကြောင်း လက်ရှိနိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အဓိကကျသည့်စက်မှုနှင့် စွမ်းအင်ကဏ္ဍ၊ပို့ ဆောင်ရေးနှင့်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာကဏ္ဍများတွင် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်စေသည့်တစ်နည်းအားဖြင့် အစိမ်းရောင် ရင်းနှီးမြှုပ် နှံမှုလုပ်ငန်းများမဟုတ်ခဲ့ရင် ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုတိုးတက်မြင့်မားလာပြီး ရာသီဥတုပြောင်းလဲ မှုဆိုးကျိုးတွေများပြားလာမှာဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်အတွင်းသက် ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက်ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုလျှော့ချရေးနှင့် လိုက် လျောညီထွေဖြစ်စေရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်အလုံးစုံပါဝင်သည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊အရင်းအမြစ်များအကျိုးရှိထိရောက်စေမည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးရေး၊ရလဒ်အားအခြေခံသည့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးစသည့်အခြေခံမူများနှင့် အ မျိုးသားအဆင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲ မှုဆိုင်ရာမူဝါဒ၊ မဟာဗျူဟာနှင့် ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ်(၂ဝ၁၈ -၂ဝ၃ဝ)ကို EU,UNEP,UN – Habitat တို့၏ ပံ့ပိုးမှုနှင့်အပြီး သတ်ရေးဆွဲနိုင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ လမ်းညွှန် မှုရရှိပြီးဖြစ်၍ အတည်ပြုထုတ် ပြန်နိုင်ရေး လုံခြုံရေး၊ တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေးနှင့် တရာဥပဒေစိုးမိုး ရေးကော်မတီသို့ တင်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်ဟု သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ပြည်ထောင်စုဝန် ကြီးဦးအုန်းဝင်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းအပြင်ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးမှ မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ဖွံ့ဖြိုးဆဲတိုင်းးများအနေနှင့်ဆိုးရွား သည့်ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်များကြောင့် အသက်သေဆုံးမှု၊ အိုးအိမ်ပျက် စီးဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ကြုံတွေ့နေရပါကြောင်း၊ ဒါကြောင့်ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုနှင့် လိုက်လျောညီ ထွေရှိစေရေးနှင့် ရာသီဥတုပြောင်း လဲမှုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိစေရေးနှင့် ရေရှည်တွင် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု လျှော့ချနိုင်ရေးအတွက် ရေရှည် ခိုင်မာသည့်အစီအမံလုပ်ငန်းစဉ် များအလျင်အမြန်ရေးဆွဲအ ကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ဖို့ အလွန်အရေးတကြီးလိုအပ်လာ ပါကြောင်းလည်း ထည့်သွင်းပြော ကြားခဲ့သည်။
အဆိုအခမ်းအနားသို့ အမျိုးသားအဆင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ရာသီဥတုပြောင်း လဲမှုဆိုင်ရာဗဟိုကော်မတီဝင်အ မြဲတမ်းအတွင်းဝန်များ၊တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ရာသီဥတုပြောင်း လဲမှုဆိုင်ရာကြီးကြပ်မှုကော်မတီမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဌာနဆိုင်ရာ အရာရှိကြီးများ၊ UNEP,UN- Habitat နှင့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်း များမှ ကိုယ်စားလှယ်များအပါအဝင် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ဖိလစ်ပိုင်တွင် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းယူတူကြောင့် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီး မြေပြိုကာ လူ
တက္ကသိုလ်များကို မြို့ပြင်သို့ ထုတ်ထားခြင်းမှာ ကျောင်းသားများ အဆင်ပြေစေရန် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်
ရန်ကုန်မြို့ထဲရှိ လေလွင့် ကလေးငယ်များအတွက် စင်တာတစ်ခုပြုလုပ်ကာ စနစ်တကျပြုစု ပျိုးထောင်ပေ?
ဂျင်းနီ ဇာတ်လမ်းတွဲမှ မင်းသားကြီး ဘေဒေးလီး အသက် (၉၁)နှစ်တွင် ကွယ်လွန်
မီဒီယာများရှေ့တွင် တောင်းပန်သဖြင့် တစ်နှစ်ကျော်ကြာ တရားစွဲဆို ခံထားရသည့် အဆိုတော် အစ္စဏီအမှုကို တရားလိုမော်ဒယ် ရုပ်သိမ်းပေး
ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်ပြီး ပိုးကျခြင်းကြောင့် ပန်းခင်းများ သုံးချိုးတစ်ချိုးခန့် ပျက်စီးမှုမျာ